မေးးsawtheodore@gmail.comးကိုညီနေမင်းရေ၊ ကျွန်တော်photoshop plugin တစ်ခုဖြစ်တဲ့ AAA Logo ဆိုတဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေး လိုချင်ပါတယ်။
သူကတော့ logo design သမားတွေအတွက်ပါ . logo ကို အလန်းလေးတွေ လုပ်ချင်ရင်တော့ ဒီကောင်လေးနဲ့ လိုသလို လုပ်လို့ရတဲ့အပြင် ready made ဒီဇိုင်းတွေကိုပါ တစ်ခါတည်း ရွေးချယ်လို့ရမှာပါ . company logo design တွေကိုလဲ ခဏလေးနဲ့ လုပ်လို့ရမှာပါ . ကဲအောက်မှာ တင်ပေးထားပါတယ် . အဆင်ပြေတဲ့ Link ကနေ သာ download လုပ်လိုက်ပါ .
Download fileflyer | Download rapidshare | Download
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 5:08 AM